★မြန်မာ့အလင်း★: “မူဆလင်တွေ လွတ်လပ်ဖို့ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကို ထောက်ခံကြ” ဟု ဆိုကာ လွတ်တော် အမတ်လောင်းများက လှည့်လည် စည်းရုံး
( ဒီမိုကုလားတွေဟာ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားတွေကို ဝေဖန် အပြစ်တင်တာ မလုပ်သေးပါဘူး။ ဒီမိုသမားတွေကိုမေးချင်ပါတယ် . . . အသင်တို့နဲ့ အတူတူလုပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့ စကားကို ယုံနေဆဲလား? )
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:13 AM
နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ပြောတတ်ပါတယ်။ ပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုလည်း မှတ်ကျောက်တင်ခံရဲတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက အညာမြေမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသား သန်းေ၇ွ ဘာသာမြန်မာလူမျိုးအစစ်တွေပါ။
မြင်.မြတ်သည်. မြန်မာမဟာ သခင်ဝါဒီဆ၇ာကြီး Mr. ဇော်မျိူး
အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှ မျိုးချစ် မျိုးစစ် လူငယ်တစု
Myanmar ID သုံးထားသည့် ကျွန်ကုလား